Gabdho Muslimiin ah oo ka cawday in Poland lagu cunsuriyeeyay - BBC News Somali
Gabdho Muslimiin ah oo ka cawday in Poland lagu cunsuriyeeyay
28 Juunyo 2017
Image caption Gabdhahan Muslimiinta ah ayaa la yaabay cunsuriyaynta lagula kacay
Gabdho Muslimiin ah oo Jermal ah oo ciyaal iskuul ah oo Poland u tagay si ay u booqdaan goobtii uu ka dhacay xasuuqii Holocaust ayaa sheegay in dadka deegaanku ay midab takooreen intii ay safarkaas ku jireen.
Booqashadan ayaa ahayd mid waxbarasho la xiriirtay.
Gabdhahan oo ka socday iskuul ku yaalla magaalada Baarliin ayaa u warramay Idaacadda Deutschlandfunk radio Iyaga oo u sheegay wixii ay la soo kulmeen. Afar ka mid ah gabdhahaas oo xijaab qabay ayaa sheegay in tacadi loo gaystay.
Mid ka mid ah gabdhaha ayaa sheegtay in candhuuf lagu tufay iyada oo dhex maraysa waddo ku taalla Lublin ka dib markii ay booliisku istaajiyeen iyaga oo iska muusoonaya oo aan wax dambi ah galabsanin.
Image caption Malaayiin Yuhuud ah ayaa lagu dilay xasuuqii Holocaust
Gabadh kale ayaa sheegtay in laga soo eryay dukaan ka dib markii ay ku hadashay luuqadda Persian-ka
Walaalkeed ayay markaas kula hadlaysay taleefan.
"Way ii yimaadeen waxayna igu dhaheen 'ma bixi kartaa' dadka halkan jooga ayaad qasaysaa ee' waxaan is waydiiyay sabab? Sababtu ma waxay ahayd in aan ku hadlay Persian oo aan ajnabi ahay? Haa," sidaas ayay u sheegtay idaacadda.
Gabadh Muslim ah oo Faransiiska lagu dhibay
Booliiska magaalada Lublin oo war qoraal ah soo saaray Talaadadii ayaa sheegay "in wax dacwad ah aysan ka soo gaarin daadkaas markii ay safarka ku joogeen.
Waxaa kale oo ay sheegeen in booliisku uu dib u baadhay kaameerooyinka ammaanka aysanna ku arkin wax dhacdo ah oo ay ku lugleeyihiin ajaaniib.
Muuqaal Gabadh Soomaali ah oo lagu tilmaamay wajiga xaragada ee 2017
Shaqaale diyaaradeed oo haweenay hawada kaga umuliyay